Nahoana no tena ilaina ny mividy fifamoivoizana amin'ny tranokala?
Amin'izao fotoana izao, misy ny fahafahana tsy manam-petra amin'ny Internet. Isan'andro dia tranonkala an'arivony maro no mivoaka rehefa mavitrika amin'ny aterineto mahafantatra ny mety hahazoana tombony amin'ny fananganana orinasa iray ao amin'ny tranonkala. Ankoatra izay, hitany izy ireo fa tsotra ny manangana tranokala, na dia lavitra ny famolavolana sy fanatsarana aza. Betsaka ny tranonkala sy ny endrika amboamboarina, ny rafitra fitantanana ny votoatin'ny fitaovana fampiroboroboana izay manatontosa ny dingana rehetra momba ny fampielezam-peo an-tserasera.
Lavitra avy amin'ireo loharanom-baovao rehetra ireo dia mety hitondra ny tena lanjany ho an'ireo mpampiasa, indrindra fa ireo tranonkala spammy. Izany no antony mahatonga ireo fitaovam-pitadiavana hametraka fitsipika henjana ao amin'ny tranonkalan'ny habaka, ka mamela loharanom-baovaon'ny tranonkala rehetra ao ambadiky ny solaitrabe. Rehefa manao izany izy ireo, dia manatsara ny fitadiavana traikefa sy manome lanja ny tranonkala mahasoa sy manan-danja izay mametraka azy ireo amin'ny TOP TSIA amin'ny valin'ny fikarohana. Na dia izany aza, noho ny algorithm mafy sy ny fifaninanana avo lenta, ireo mpivarotra an-tserasera dia miatrika fahasarotana amin'ny fifamoivoizana eo amin'ny toerana misy azy. Ny fifaninanana amin'ny isa vohikala mifandraika amin'ny niche dia tsy zavatra mora ary mety ho very ny tranokalanao. Izany no antony ilainao ny mandany ny lafiny rehetra amin'ny fomba rehetra, anisan'izany ny fividianana fifamoivoizana amin'ny tranokala.
Ny fividianana traikefa amin'ny tranokala: antony, fomba, ary tombontsoa
Anio izao, mividy entana an-tserasera amin'ny mpivarotra an-tserasera. Ny mpividy dia mandoa vola ho an'ireo mpanaraka, mizara, ary tia amin'ny sehatra media sosialy, tompon'ny tranonkala mividy trosan'ny mpanjifa ary mitarika avy amin'ny tranokala mifandraika amin'ny niche. Na dia izany aza, raha tokony hividy mpanaraka sandoka, dia mety ny mandoa vola amin'ny tena fisainana izay hiasa maharitra. Ohatra, raha miresaka momba ny sehatra media sosialy isika, ny fifaninanana sy ny fanomezana dia mety ho fomba mahafinaritra ahafahana manintona mpanaraka vaovao sy mampifandray azy ireo amin'ny marikao. Ilaina ny fifampizarana amin'ny fiaraha-monina ary araho fa ny isan'ireo mpanaraka anao dia mitombo amin'ny an'arivony ao anatin'ny fotoana fohy.
Mitodika amin'ny olana momba ny fividianana fifamoivoizana amin'ny tranonkala mba hanatsarana ny fahefanao amin'ny marika ao amin'ny tranonkala, ny vahaolana tsara dia ho tonga amin'ny fifanarahana iraisam-pirenena miaraka amin'ny mpitarika ny orinasanao. Mila mandresy lahatra azy ireo ianao hanolotra ny marika amin'ny mpihaino azy. Hanamafy ny fahefanao izany ary hampahafantatra ny tranonkala fantatra eo imason'ireo mpikaroka sy mpampiasa. Ny teboka fanombohana dia ny mamantatra hoe inona no tian'ny mpamorona iray ho setrin'izany. Raha ny lalàna, ny vola dia toerana tena tsara hanombohana. Na izany aza dia azonao atao ihany koa ny manome azy ireo lanjany, mametraka ny fijerena fohy momba ny tolotr'izy ireo ao amin'ny tranokalanao. Izany no antony hanoroako anao hikaroka ny serivisy alohan'ny hanalanao azy ireo. Arakaraka ny anaovanao an'ity karazana zavatra ity, ny ambony dia ny fahafahana miditra amin'ny Internet.
Na izany aza, raha hampitombo ny fidiram-bolan'ny isam-bola ianao dia mila mividy fifamoivoizana. Raha mikasika ny fividianana fifamoivoizana amin'ny tranokala, dia misy tambajotra sy paikady maro azon'ny orinasa ampiasaina. Misy orinasan-drindrina sasany manolotra tompona tranonkala amin'ny fifamoivoizana sy ny Google Adsense. Na izany aza, tsy tokony handeha hivezivezy be ianao amin'ny alàlan'ny fifamoivoizana mba hisorohana ny ahiahy avy amin'ny milina fikarohana.
Mba hamaranana, te hilaza aho hoe tsy afaka mividy fifamoivoizana ianao amin'ny fotoana rehetra. Indray andro, ny milina fikarohana dia haharihary ny fidiranao ary manasazy anao amin'ny sazy lava. Izany no antony ilainao hampihatra teknika fanatsarana ny fikarohana Source .